दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २७ गते बुधबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १३ - Sutra TV - Digital News Portal Sutra TV
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २७ गते बुधबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १३
मेष : द्वन्द्वबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले तपाईंको रोग अझै बढाउन सक्छ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। तपाईं मायालु मुडमा हुनुहुनेछ, त्यसैले आफ्नो र आफ्नो प्रियको लागि विशेष योजना बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। स्थापित र भविष्यको रुझानमा तपाईंलाई केही दिन सक्ने मान्छेसँग आबद्ध हुनुहोस्। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
वृष : साथीलाई केही गलत अर्थ लाउनाले तपाईंको लागि अप्रिय प्रतिक्रिया आउन सक्छ, कुनै पनि निर्णय पारित गर्नु अघि सन्तुलित दृष्टिकोण बनाउनुहोस्। वित्तीय अवरोधबाट बच्नको लागि आफ्नो बजेट हेर्नुहोस्। मान्छे र तिनीहरूको मनसाय विषयमा छिट्टो निर्णय नलिनुहोस्, तिनीहरू दबाबमा हुन सक्छन् र तपाईंको दया र समझको आवश्यकता हुन सक्छ। कार्डमा कसैले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन। अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा समर्पण गर्नुहोस्, तर तपाईंको चासो नहुने विषयहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। आफ्नो जोडीले तपाईंलाई केही नराम्रा कुराहरूका साथै तपाईंको किशोर समयको याद दिलाउने छन्।
मिथुन : आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। तपाईंको ज्ञान र राम्रो हास्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। तपाईंको प्रिय रोमान्टिक मुडमा हुनेछन्। आज तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको धेरै प्रशंसा हुनेछ र अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो मनको जाँच गर्नु हुनेछ, तपाईंहरू कसैले चेस-क्रोसवर्ड खेल्न लाग्नुहुनेछ भने कसैले कथा-कविता लेख्नु हुनेछ वा भविष्यको बारेमा केही योजना बनाउनुहुनेछ। तपाईंलाई आज विवाहको साँचो परमानन्द थाहा हुनेछ।
कर्कट : आफुलाई राम्रो बनाउन आत्म-सुधार परियोजनाहरुमा आफ्नो ऊर्जा प्रयोग गर्नुहोस्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। यो प्रेमको लागि तपाईंको भाग्यशाली दिन हो। तपाईंको प्रेमीले तपाईंको लामो प्रतीक्षा गरेका कल्पनाको बोध गराउनेछन्। आज तपाईंले प्राप्त गरेको ज्ञानले साथीहरूसँग सामना गर्न तपाईंलाई सहारा दिन सक्छ। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। विश्व आज नाश हुन सक्छ, तर तपाईं आफ्नो जीवनसाथीको अँगालो बाहिर आउन सक्नु हुनेछैन।
सिंह : इच्छा शक्तिको कमीले तपाईंलाई भावनात्मक र मनोवृत्तिको सिकार बनाउन सक्छ। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। परिवार, छोराछोरी र साथीहरूसँग समय बिताउनाले तपाईंलाई ऊर्जा सुधारमा सहायत मिल्नेछ। मायामा डुब्नु आज तपाईंको लागि पाप हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस्। नयाँ साझेदारी आज कष्टपूर्ण हुनेछ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईंको जोडी अरूको प्रतिकूल प्रभावमा फँस्न सक्छ र तपाईंसँग झगडा गर्नेछ, तर तपाईंको प्रेम र दयाले सबैलाई मिलाउनेछ।
कन्या : तपाईंको सकारात्मक दृष्टिकोणले तपाईंका वरिपरिका मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्नेछ। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस्, कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। तपाईंको लागि प्रेम हावामा छ। मात्रै वरिपरि हेर्नुहोस्, सबै कुरा गुलाबी छ। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ। आजभोली तपाईं र तपाईंको जोडी धेरै खुसी हुनु हुँदैन भने, तपाईं आज पागल रमाइलो गर्न जानु हुँदैछ।
तुला : खोलेर राखेको खाना नखानुहोस् किनकि यसले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोस् किनकि यसले तपाईंका हजुरबा हजुरआमाको भावनामा चोट लाग्न सक्छ। फतफताएर आफ्नो समय बर्बाद गर्नुभन्दा मौन बस्नु राम्रो हो। हामी समझदार गतिविधिहरुको माध्यमबाट जीवनको अर्थ दिन्छौं भनेर बुझ्नुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान राख्नुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तपाईंला आफ्नो प्रिय फोन गर्नेछन्, यसैले यो राम्रो दिन हो। तपाईंले लामो समयदेखि काम गरिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनामा ढिलाइ भएको छ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
वृश्चिक : आजको मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस्, तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। तपाईंले धेरै नभेट्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्न राम्रो दिन। आज तपाईंले आफ्ना साथीको अनुपस्थितिमा उनको खुशबू महसुस गर्नु हुनेछ। आज, तपाईंलाई आफ्नो मालिक सधैं तपाईंसँग किन यति अशिष्ट छ भन्ने सत्य थाहा हुनेछ। यसले तपाईंलाई साँच्चै नै राम्रो लाग्नेछ। तपाईं निष्कर्षको लागि हतारिनु भयो र अनावश्यक कार्यहरू गर्नुभयो भने यो एउटा दुखपूर्ण दिन हुनेछ। आज तपाईंले वैवाहिक जीवनको परमानन्द स्वीकार गर्ने प्रशस्त अवसर पाउनु हुनेछ।
धनु : भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। काम दबाब बढ्नाले मानसिक उथलपुथल र कोलाहल। दिनको उत्तरार्द्धमा आराम मिल्नेछ। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ, र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने, त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईंको मुड नराम्रो भएकोले आफ्नो जोडीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ।
मकर : तपाईंको मनलाई अनावश्यक विचारहरूले कब्जा गर्न सक्छन्। खाली मस्तिष्क शैतानको कार्यशाला हुने हुनाले शारीरिक व्यायामहरूमा आफूलाई संलग्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ। तपाईंका परिवारका सदस्यहरुसँग केही कठिनाई हुन सक्छ तर आफ्नो मनको शान्ति नष्ट हुन नदिनुहोस्। आज प्रेम नभएको महसुस हुन सक्छ। यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। कुनै बाह्य पक्षले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच मतभेद सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न सक्छ, तर तपाईंहरू दुवैले यसलाई समाधान गर्नु हुनेछ।
कुम्भ : तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। आफन्तहरू र साथीहरूलाई तपाईंको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नदिनुहोस्, नत्र तपाईंले चाँडै आफ्नो बजेट उँचो पाउनु हुनेछ। यो अचम्मको दिनमा तपाईंका सम्बन्धमा भएका ती सबै उजुरी र ईर्ष्या अचानक हराउनेछन्। स्थापित र भविष्यको रुझानमा तपाईंलाई केही दिन सक्ने मान्छेसँग आबद्ध हुनुहोस्। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। तपाईं वरिपरि मानिसहरूले तपाईंको सम्बन्धमा मतभेद सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने धेरै सम्भावना छ। बाहिरी मान्छको सल्लाह अनुसार केही नगर्नुहोस्।
मीन : केही बिघ्नहरूको सामना गर्नु पर्न सक्छ। मन नमार्नुहोस् तर चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न कठिन काम गर्नुहोस्। यी बिघ्न बाधाहरूले अझै उत्थान गराउन सकुन। आफन्तहरूले पनि संकटको समयमा मद्दत गर्नेछन्। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। तपाईंको कार्डमा धार्मिक स्थल वा आफन्तको घरमा भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। आफ्नो प्रियसँग वनभोजमा गएर आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्। व्याङ्किङ्ग क्षेत्रका पेशावरहरूलाई राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। कसैको लागि कार्डमा पदोन्नतिको सम्भावना ऊँचो छ। आनन्दलाई दुइ गुणा बढाउन तपाईंले सहकर्मीसँग आफ्नो खुशी बाँट्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
साग समापन प्रधानमन्त्रीले गर्नेः खेलाडीलाई प्रोत्साहदेखि पाकिस्तानलाई झण्ड हस्तानतरणसम्मको तयारी